Sergio Ramos Oo Dhaawac Soo Gaadhay, Kulamada Uu Maqnaanayo Oo Haddaba Wax Laga Ogaaday Iyo Real Madrid Oo Madaxa Ka Qabsatay | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Sergio Ramos Oo Dhaawac Soo Gaadhay, Kulamada Uu Maqnaanayo Oo Haddaba Wax Laga Ogaaday Iyo Real Madrid Oo Madaxa Ka Qabsatay
(17-11-2018) Kabtanka xulka qaranka Spain ee Sergio Ramos ayaa dib ugu laabtay dalkiisa kaddib markii uu dhaawac soo gaadhay intii ay socotay ciyaartii xalay guul-darradu kasoo gaadhay ee Croatia kaga adkaatay 3-2.
Dhaawacan oo madax xanuun ku ah Real Madrid oo ay hore uga maqnaayeen laacibiin badan, sida Marcelo, Carvajal, Nacho, Reguilon, Casemiro iyo kuwa ayaa waxay geli doontaa xaalad murugo leh oo ay ka maqan yihiin inta badan xiddighii goolka u ilaalin jiray, hase yeeshee waxa dhinaca kale adeeggiisa waayi doona xulka qaranka dalkiisa Spain oo kulan saaxiibtinimo kula ballansan dalka Bosnia-Herzegovina toddobaadkan.
Ramos oo dhaliyey gool rikoodhaha ah qaybtii dambe, ayaa la sheegay inuu inta badan isagoo dhaawac muruqa ah qaba ciyaarayay kulanka, laakiin waxa uu dalkiisa ka badbaadin kari waayey inay guul-darraystaan.
Kabtan Ramos ayaa laga saaray liiska ciyaartooyada Spain ee tababare Enrique ku xisaabtamayo kulanka kusoo fool leh, laakiin baadhitaano ay ku samayn doonaan dhakhaatiirta Real Madrid ayaa lagu qiimayn doonaa xaaladdiisa, waxaana halkaas ay kaga dhawaaqi doonaan sida xaaladdiisu tahay, inuu ciyaari karo kulamada muhiimka ah ee kusoo fool leh iyo inuu ku biirayo liiska maqaneyaasha muddada dheer.
Spain oo ku jirta Group 4 ee tartanka UEFA Nations League ayaa waxay xalay marti u noqotay Croatia oo kaaga soo adkaatay 3-1 kulan ka dhacay Zagreb laakiin waxay rajo ka sugaysaa ciyaarta xiddigaha uu hoggaaminayo Luka Modric ay Axadda la yeelan doonaan England, halkaas oo haddii ay barbar-dhac ku galaan ay kaalinta koowaad kaga soo bixi doonto Groupka.